Maxay ka wada hadleen Sheekh Shariif & Guddoomiyaha Aqalka Sare? - Awdinle Online
Guddoomiyaha Midowga Musharrixiinta ahna Madaxweynihii hore ee Soomaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa hoygiisa ku booqday Guddoomiyaha Aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi.
Labada mas’uul ayaa ka wada hadlay xaalada siyaasadeed ee dalka iyo Arrimaha doorashooyinka oo aan weli heshiis laga gaarin, balse loo balansan yahay in go’aan looga gaaro shirka ka furmaayo Magalada Dhuusamareeb.
Xogaha laga helay kulanka ayaa sheegay in labada mas’uul ay siweyn uga hadleen arrimo la xiriira doorashooyinka Xildhibaannada labada Aqal ee ka imaanaya gobolada Waqooyi.
Guddoomiyaha Aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ku sugan Magaalada Muqdisho ayaa xalay qoraal uu u diray Madaxweynaha Galmudug waxaa uu ogeeysiiyay in uu tegaya Dhuusamareeb si u shirka uga qye-galyo, hayeeshee warar soo baxayay ay sheegayeen in aan la siin wax jawaab ah maadaama aan lagu casuumin.
Previous articleDhacdo sababtay dhimasho & dhaawac oo ka dhacday Walanweyn
Next articleDowladda oo Ciidamo geeysay degaano lagu arkay Xubno ka tirsan Al-Shabaab+Sawirro